5 cunto si kor loogu qaado socodka mindhicirka | Bezzia
Toñy Torres | 13/09/2021 16:00 | Nafaqeyn
Lahaanshaha marinka mindhicirka oo wanaagsan waa lama huraan si loogu raaxaysto caafimaad wanaagsan. Sababtoo ah ka -saaridda qashinka jidhka waa lagama maarmaan si wax walba si sax ah ugu dhex shaqeeyaan gudaha. Calool -istaaguna wuxuu sababi karaa xanuunno kala duwan sida bararka xididdada, oo si fiican loogu yaqaanno baabasiir ama dillaac dabada, iyo kuwo kale. Sidaa darteed, aad bay muhiim u tahay in si dabiici ah loogu saleeyo walxaha qashinka iyada oo loo marayo saxarada.
Si loo hagaajiyo socodka mindhicirka, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco cunto kala duwan, dheelitiran oo caafimaad leh. Fiber -ku waa nafaqada inta badan caawisa, laakiin kaligeed ma aha, maadaama kuwa kale sida cuntooyinka qallalan, fuuq -celinta ama dufanka ay yihiin kuwa doorbida gaadiidka. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo wanaajiyo safarkaaga xiidmaha maalin kasta ka qax oo sidaas u hagaaji caafimaadkaaga, waa inaad ku darto cuntooyinkaan cuntadaada.
1 Sida loo hagaajiyo safka xiidmaha
1.2 Digirta cagaaran
1.3 Jajabka Oat
1.4 Saliid saytuun ah oo dheeraad ah
1.5 Flax iyo miraha chia si loo hagaajiyo gaadiidka mindhicirka
Sida loo hagaajiyo safka xiidmaha
Cuntada ka sokow, waraabinta ayaa door weyn ka cayaarta isla'egta. Nidaamka dheef -shiidka wuxuu leeyahay shaqooyin dhowr ah waxaana ka mid ah samaynta saxarada si meesha looga saaro qashinka jirka. Sida foomamkaan, xiidmaha weyn ayaa biyaha ka saara sidaasna ku adkaada. Marka jidhku aanu biyo ku filnayn, saxaradu waxay noqotaa mid aad u adag oo engegta oo ay adkaato in la gudbo.
Biyo -la'aantu waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn calool istaag, sidaas darteed aad bay muhiim u tahay in la qaato caadooyin wanaagsan si looga fogaado cillad ku timaadda mindhicirka. Markay taasi dhacdo, saxaradu waxay noqdaan kuwo xanuun badan, babaasiirta, dillaaca futada, iyo calool -xanuun aan caadi ahayn oo calool -fadhi ah ayaa soo bixi kara. Cabitaanka 2 litir oo biyo ah maalintii ayaa kaa caawin doonta inaad hagaajiso gaadiidka mindhicirka, marka lagu daro ku dar cuntooyinkaan cuntadaada.
Ilaha dabiiciga ah ee fiyuuska, fiitamiinnada iyo macdanta, miraha ayaa ah cuntada aan ka maqnaan karin cunto kasta oo caafimaad leh. Si loo hagaajiyo taraafikada, waxaa ugu wanaagsan kiwi, plomme, liin iyo tufaax. Gaar ahaan Kiwi waa cunto aad loogu taliyo dadka si joogto ah ula il -daran calool -istaagga. Midhahan ayaa hodan ku ah fiber -ka milma sidoo kale waa prebiotic dabiici ah. Qabo quraac 2 subax kasta oo waxaad yeelan doontaa gaadiid joogto ah.
Khudaarta iyo guud ahaan khudaarta ayaa lagama maarmaan u ah cunto caafimaad leh, maadaama ay yihiin cuntooyin hodan ku ah fiber, fiitamiinno iyo macdanno aad muhiim ugu ah habsami u shaqeynta jirka aadanaha. Laakiin haddii ay jirto khudaar si gaar ah loogu taliyay in la hagaajiyo taraafikada, waa digirta cagaaran. Kuwani waa hodan ku ah fiber -milma, taas oo macnaheedu yahay inay cunto u tahay microbiota mindhicirka.
Guud ahaan, badarka oo dhan ayaa lagama maarmaan u ah shaqada mindhicirka oo wanaagsan, laakiin gaar ahaan miro -dheefyada faa'iidooyinkeeda badan. Iyaga dhexdooda, boorashka duuban ayaa hodan ku ah fiber -milmi, taas oo macnaheedu yahay inay u dhaqmayso sidii prebiotic dabiici ah. Waxaad qaadan kartaa jajabyada oat quraacda, yogurt ama kareemada khudradda ee aad ugu jeceshahay.
Saliid saytuun ah oo dheeraad ah
Dunida oo dhan looga yaqaanno dahab dareere ah, saliidda saytuunka ah ee bikradda ah ee dheeraadka ah waa mid ka mid ah cuntooyinka sida aadka ah loo ixtiraamo. Habka dheef -shiidka waa lagama maarmaan, maadaama uu xajinayo xaarka feeraha oo la subkay taasina waxay doorbideysaa in laga saaro dabada. Dabcan, saliidda waa in la qaataa qabow ku jira saladh ama ku dar dhadhan khudaarta, inta u dhaxaysa 4 iyo 6 qaado oo saliid saytuun ah oo bikrad ah oo qabow oo dheeraad ah maalintii ayaa ku filan gaadiidka saxarada mindhicirka.
Flax iyo miraha chia si loo hagaajiyo gaadiidka mindhicirka
Waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin cuntooyin aad u sarreeya hantidooda badan ee faa'iidada u leh caafimaadka. Waxaa ka mid ah hantida hagaajinta gaadiidka xiidmaha. Marka miraha la qooyo, sii daa walaxda dhirta oo la yiraahdo mucilage. Maaddadani waxay mas'uul ka tahay nadiifinta xiidmaha waxayna kor u qaadaa saxarada.
Ka sokow inaad ku darto cuntooyinkan cuntadaada, iyo sidoo kale cuntooyin kale oo aad u caafimaad badan oo lagama maarmaan ah sida caanaha, borotiinka xoolaha iyo khudradda, digiraha ama dufanka, waa inaad ku dartaa jimicsi yar oo jimicsi ah maalin kasta habka caadiga ah. Jimicsigu waa lama huraan si kor loogu qaado dhaqdhaqaaqa xiidmaha. Marka la soo koobo, waraabinta, nafaqada iyo jimicsigu waa furayaasha caafimaadka mindhicirka wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Nafaqeyn » 5 cunto si loo wanaajiyo socodka mindhicirka